Home / Interior design / Drafitra efitrano fisakafoanana malaza 80 izay manazava ny aingam-panahin'ny endrika!
2021 / 05 / 25 FisokajianaInterior design 7359 0
Volavola fisakafoanana malaza
Ny famolavolana trano fisakafoanana tsara dia mety hahatonga ny olona hahatsapa ho lanonana matanjaka be. Araka ny lazain'ny ohabolana taloha hoe: "Ny sakafo no filaharan'ny andro", ary ny trano fisakafoanana dia ampahany lehibe amin'ny famolavolana anatiny. Ny jiro, ny firafitra ary ny fanaka dia mety hisy fiantraikany amin'ny fampisehoana ny efitrano fisakafoana. Ny efitrano fisakafoana tsara dia tsy vitan'ny hoe mamelombelona, ​​fa mety "mahasalama" mihitsy aza. Androany dia mizara tranga fisakafoanana 80 izahay mba hanazavana ny aingam-panahinao
Ho fanampin'izay, natombokay ihany koa ny fotoana farany lasa ny efitrano fandraisam-bahiny farany, fidirana, efitrano fatoriana, famolavolana ny efitrano fisakafoanana, liana amin'ny fantsona eto. 2021 famolavolana sofa farany farany | Modely 100, famolavolana rindrina fahitalavitra farany 2021 | Modely 80, famolavolana trano fidiovana farany farany 2021 | Modely 100, famolavolana fidirana farany 2021 | Modely 80, famolavolana efitrano fatoriana farany 2021 | Modely 80, modely 80. Volavola 80 lavarangana | mendrika ny angonina.
Latabatra fisakafoanana latabatra nosy
Ny latabatra fisakafoanana sy ny endrika fifangaroan'ny latabatra nosy dia mety amin'ny fampiasana dakozia misokatra malalaka. Ny famolavolana ny nosy sy ny latabatra fisakafoanana amin'ny fampiasana fitaovana samihafa, na dia amin'ny fiaramanidina samihafa aza dia azo antsoina hoe splicing. Ny lafiny iray amin'ny nosy dia azo ampiasaina ho toy ny latabatra fandidiana hanampy amin'ny fampivoarana ny asan'ny lakozia. Ny latabatra fisakafoanana dia mihazakazaka miaraka amin'ny nosy hitsena ny fisakafoanana. Ity karazana famolavolana efitrano fisakafoanana ity dia mifanerasera be. Ny fivorian'ny mpianakavy, eo am-panomanana sakafo hisakafoanana, dia afaka mamaly tanteraka ny fifandraisana misy eo amin'ny fianakaviana sy ny namana.
Ny hazo fisaka vita amin'ny marbra no famolavolana latabatra fisakafoanana nosy matetika. Ny hatsiakan'ny marbra sy ny hafanan'ny vatan-kazo dia voaroaka, mampiseho endrika hatsarana hafakely.
Ny fanitarana nosy dia karazana efitrano fisakafoanana hafa izay mifanohitra amin'ny latabatra nosy, mipaka hatrany amin'ny iray amin'ireo fitaovana latabatra nosy. Ity karazana endrika ity dia holistic kokoa. Matetika dia fanitarana marbra, takelaka sns, izy io ho tonga tampon'ny latabatra fisakafoana. Ity karazana endrika ity dia mila mijery tsara ny haavon'ny latabatra fisakafoanana sy ny latabatra nosy, mazàna hisy fahasamihafana eo amin'ny roa tonta. Raha toa ny halavany mitovy ny olona OCD dia mety mila sorona ny haavon'ny latabatra nosy na hampiakarana ny haavon'ny latabatra fisakafoana.
Misaraka ny efitrano fisakafoanana
Efitra fisakafoanana tsy miankina amin'ny famolavolana ny be mpampiasa indrindra, mpamorona na mpamorona maro amin'ny fanaovana drafitra trano no hanokana toerana azo anaovana efitrano fisakafoanana misaraka. Ny efitrano fisakafoanana malalaka ao amin'ny famolavolana dia mila mitandrina ny fampidirana ny habaka iray manontolo, ka amin'ny lafiny fitaovana, ny loko sy ny loko hafa dia mila mitandrina ny firindrana miaraka amin'ny iray manontolo. Ny vokatr'io karazan-drafitra fisakafoanana io dia matetika avy amin'ny façade, ambony sy kojakoja sns .., ary haingon-trano bebe kokoa no azo atao amin'ny fanaka malefaka hanatsarana ny hatsarana.
Na ny famolavolana ny endrika rindrina any aoriana, na ny firavaka haingon-trano lehibe, dia afaka manamboatra ny efitrano fisakafoanana tsy miankina hanatsara ny fahatsapana ny rivotra iainana.
Ny bar ho efitrano fisakafoanana dia famolavolana tena mampihetsi-po tokoa, fa ny fampiasana bara amin'ny toerana kely dia safidy tsy afa-manoatra eo ambany faneren'ny faritra maro. Amin'ny ankapobeny ny trano kely dia misafidy fisakafoanana fisotroana raha te-hamonjy toerana, azonao atao ny misafidy ny hifandray amin'ny sideboard fisakafoanana, nosy, sns. Ny famolavolana bara amin'ny trano be dia be mba hahatratrarana ny asan'ny fialam-boly, fisotroana divay ary fanaovana dite dia famolavolana tena mampihetsi-po.
Efitra fisakafoana carousel
Mpamorona maro no nampiasa ny efitrano fisakafoana amin'ny seza karatra ho vahaolana amin'ny fisakafoanana kely sy fitahirizana ny fitaovam-piadiana majika. Ankehitriny anefa, ny carousel dia tsy mitovy hevitra amin'ny trano kely intsony. Ny famolavolana ny carousel matetika dia tsy kabinetra misaraka. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana dia miseho miaraka amina endrika hafa izy, toy ny backdrop, kabinetra fitehirizana, kabinetra fisakafoanana, sns.
Ny mpihazona karatra dia mipoitra miaraka amin'ny atsy aoriana. Ny seza hazo tany am-boalohany dia toa mivelatra avy amin'ny rindrina, miaraka amin'ny fahatsapana ny fahamendrehana.
Previous :: Toerana atsinanana mahay mandanjalanja sy milamina miaraka amin'ny haben'ny rivotra sy ny gadona│Fandinihana an'i Milo Next: Ny fanasitranana tsara indrindra indrindra dia ny fahamendrehan'ny trano mitokana - ny endrika Gizhu